Business Update: Baaghi 2 ganacsigiisa gudaha Hindiya, suuqyada caalamka iyo wadarta guud halka uu maraayo – Filimside.net
Taariikhda: May 3, 2018
Tiger Shroff filimkiisa Baaghi 2 ayaa weli ganacsi sameenayo asigoo haatan maraayo 159 Crore mudo 5-todobaad oo uu tiyaatarada saaran yahay waxaana hubaal ah inuu ganacsigiisa 160 Crore ku istaagi doono.
Inkastoo filimka weyn ee Hollywood-ka ah Avengers – Infinity War tiyaatarada Hindiya heesto hadana Baaghi 2 weli ganacsi ayuu sameenayaa.
Baaghi 2 kooxda cajaladaha qeybiyaan waxay ka heli doonaan 80 Crore taasi oo ka dhigan in macaash adag laga helay mashruucaan 59 Crore lagu qarash gareeyay.
Baaghi 2 wuxuu noqday filimka lacagaha ugu badan sanadkaan kasoo xareeyo gobolada Bihar, Assam, Odisha, Rajasthan iyo Gujarat.
Fadlan hoos kaga bogo mudo 5-todobaad ah Baaghi 2 ganacsiga uu sameeyay oo ay soo daabacday shabakada BOI:
Todobaadka kowaad – 110.81 Crore
Todobaadka labaad – 32.74 Crore
Todobaadka sedexaad- 10.48 Crore
Todobaadka afaraad – 4.19 Crore
Todobaadka shanaad – 1 Crore (mudo 5-maalmood ah)
Wadarta Guud – 159.22 Crore (Trade Figure).
Dhinaca kale Baaghi 2 ayaa ganacsi wacan suuqyada caalamka ka sameeyay wuxuuna ka keenay $7million weliba Gulf iyo Pakistan ganacsi heer sare ah ayuu ka sameeyay.
Ugu dambeyntii Baaghi 2 ganacsigiisa isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka wuxuu kasoo xareen doonaa 250 Crore (Worldwide Gross).
Waxaa Aqrisay 720
natiijadiisa mida kale varun dawn masameeyay filim 7million suuqyada caalamka ka keenay marka laga reebo dilwali tankale tiger shroff waxad dhahdeen kaalinta 6aad buy kaga jiraa 10ka atoore ee India marka maka awood badan yahay varun iyo ranveer waana mhdsantihiin
Varun Dhawan ma sameynin filim kaligiis uu hogaamiye ka yahay oo $7M suuqyada caalamka kasoo xareeyay midkiisa ugu badan waa Judwaa 2 oo keenay $5.71M sida BOI ku diiwaan gashan.
Awooda atoorayaasha BOI ayaa todobaadkii hore kala saartay waqti xaadirkaan la joogo Tiger wuu ka awood badan yahay Varun, Ranbir iyo Ranveer asigoo kaalinta 6-aad kaga jiro dhanka awoodaha atoorayaasha waqtigaan xaadirkan la joogo.